DAAWO:- Axmed Karaash iyo Ciidamo badan oo gaaray Furimaha Dagaal Gobolka Sool + Abaabul dagaal oo bilaawday – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDAAWO:- Axmed Karaash iyo Ciidamo badan oo gaaray Furimaha Dagaal Gobolka Sool + Abaabul dagaal oo bilaawday
March 24, 2020 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somali News, Somaliland 3
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowlada Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan (Karaash)oo ay weheliyaan Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Puntland iyo Saraakiisha u Xilsaaran dib u dhiska Ciidamada Puntland ayaa maanta gaadhay jiida-hore ee Gobolka Sool halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Difaaca Puntland.
Ujeedada Safarka Madaxweyne ku Xigeenka iyo Weftigiisa ayaa Salka ku hayey u kuur-gelida Xaalada Ciidamada Difaaca ee ku sugan Jiida-Hore ee Gobolka Sool iyo soo Xirida Tababar ay qaateen Cutubyo ka tirsan Ciidamada Daraawiishta
Ugu dambayn Madaxweynaha ayaa Kormeer ku tegey Fariisimada kala duwan ee ay ku sugan yihiin Ciidamadu iyo Xarun Cusub oo lagu Tababari doono.
Sool, Sanaag iyo Cayn in dagaal lagu xoreeyo u ma baahna ee waxay u baahan yihiin in maanka iyo laabta laga xoreeyo. Dadka ku kala qoqoban oo tuuteyaasha kala duwan isku hor fadhiyaa waa uun kuwo wada dhashay oo aan waxba kala ahayn.
Cuqaasha, waxgaradka, iyo aqoonyahannada Harti ayuu saaran yahay waajibka kaga beeggan in ay dowrkooda masiiriga ah ciyaaraan oo ay beelahan la kala reereeyay oo qaar lagu rartay u bidhaamiyaan waxa u wada muqaddaska ah ee uu aayahoodu ku wada saleysan yahay.
Waxaana weeye in la dhaadsiiyo dhaxaltooyadooda midda ah ee shilimaadka yar looga indhasarcaadiyay.
Ma Cismaankii markii horeba magacyada badnaabaa Boodhari imikana la baxay? Qoraalku waa qoraalkiisii.
bar naamuj la yiraah baa jira iftax yaa sam sam markaa xoraynta sool waxaan u arkaa ee karaash barnaamujkaa oo ciyaalku daawadaan